Baiboly pejy 24 - Ny Baiboly
Voalohany < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Manaraka Farany
Jenezy toko 39 (tohiny)
2Nomban'ny Tompo Josefa, ka nahazoam-panambinana tamin'ny zavatra rehetra izy; nonina tao an-tranon'ny Ejipsiana tompony izy. 3Hitan'ity tompony fa nomban'ny Tompo izy, ary nambinin'ny Tompo teo an-tànany avokoa ny zavatra rehetra nataony. 4Dia nahita fitia teo imasony Josefa, ka nampanaoviny raharaha teo aminy, natsangany ho filohan'ny tranony izy, ary nataony eo am-pelatanany ny fananany rehetra. 5Raha vantany vao notendreny ho filohan'ny tranony amam-pananany rehetra izy, dia notahin'ny Tompo ny tranon'ity Ejipsiana noho ny amin'i Josefa, ary tonga tamin'ny fananany rehetra, na an-tsaha na an-tanàna, ny fitahian'ny Tompo. 6Ary napetrany teo an-tanan'i Josefa avokoa izay nananany; ka tsy niahy na inona na inona intsony izy taminy, afa-tsy ny hanin-kohaniny. Ary Josefa dia sady bikàna no tsara tarehy.
7Ary taty aorian'izany, dia sendra nanopy ny masony tamin'i Josefa ny vadin'ny tompony, ka nanao hoe: Avia handry amiko. 8Nandà izy ka nanao tamin'ny vadin'ny tompony hoe: Indro ny tompoko fa tsy miahy na inona na inona intsony amiko, amin'ny ato an-tranony, ary ny fananany rehetra napetrany eo an-tanako. 9Tsy lehibe noho izaho izy ato an-trano; hianao irery no narovany tamiko, fa vadiny hianao. Koa ataoko ahoana no fanao izany ratsy lehibe izany, sy hanota amin'Andriamanitra? 10Ary na dia niteny tamin'i Josefa isan'andro isan'andro aza ravehivavy, dia tsy nety nandry taminy izy, na hiara-mitoetra aminy. 11Indray andro izy niditra tao an-trano hanao ny raharahany; ary tsy nisy tao ny olona tamin'io trano io, na dia iray aza. 12Ka nosamborin-dravehivavy tamin'ny lambany izy, nataony hoe: Avia handry amiko. Navelan'i Josefa teo an-tànany anefa ny lambany, ka nandositra tany ala-trano izy. 13Nony hitan-dravehivavy fa ny lambany navelany teo an-tànany, izy nandositra any ala-trano; 14dia niantso ny mpanompo tao an-tranony izy, ary niteny taminy nanao hoe: Jereo fa nampidirany Hebrio hisangy antsika. Nidiran-dralehilahy iny teto aho, handriany amiko, ka niantsoantso mafy erý aho.
15Nony injay reny nanandra-peo niantso mafy aho, ny lambany navelany eto anilako, ary nandositra any ala-trano izy. 16Dia napetrany teo anilany teo ihany ny lamban'i Josefa, mandra-podian'ny tompony ao an-trano. 17Ary ireo teny ireo ihany no nolazainy taminy koa nataony hoe: Iny andevolahy Hebrio, izay nampidirinao teto amintsika iny, dia nankatý amiko hisangy ahy. 18Fa nanandra-peo niantsoantso aho, ka dia navelany teo anilako ny lambany, ary nandositra any ala-trano izy. 19Nony ren'ny tompon'i Josefa ny tenin'ny vadiny nanao hoe: Izany no nataon'ny andevolahinao tamiko, dia nirehitra ny fahatezerany. 20Nalainy Josefa ka nataony an-tranomaizina, amin'ny fitoerana fitanana ny olona diso tamin'ny mpanjaka. Dia tao an-tranomaizina tao izy.
21Nomban'ny Tompo anefa Josefa sady nanamparany ny hatsaram-pony, ary nampahazoany fitia tamin'ny mpitandrina ny tranomaizina. 22Natolotry ny mpitandrina ny tranomaizina ho andraikitr'i Josefa ny olona rehetra tao an-tranomaizina; ary nataony tonian'izay rehetra natao tao izy. 23Tsy nokarakarain'ny mpitandrina ny tranomaizina intsony izay rehetra mby an-tànan'i Josefa fa nomban'ny Tompo izy sady nomban'ny Tompo tamin'izay rehetra nataony.
Jenezy toko 40
Ny nivoasan'i Josefa ny nofin'ireo mpifatotra roa lahy.
1Taty aorian'izany dia sendra diso tamin'ny mpanjakan'i Ejipta, tompony, ny mpandroso divay, sy ny mpitàntana mofo, ao amin'ny mpanjakan'i Ejipta.
2Ka tezitra Faraona tamin'ireo manamboninahiny roa lahy ireo, dia ny lehiben'ny mpandroso divay sy ny lehiben'ny mpitàntana mofo.
3Dia nasainy nahiboka tao amin'ny lehiben'ny mpiambina ireo, tao an-tranomaizina tao, amin'ny fitoerana nitanana an'i Josefa.
4Josefa no notendren'ny lehiben'ny mpiambina ho eo amin'izy roa lahy ireo, ka dia nanompo an'ireo izy, ary elaela ihany no tao an-tranomaizina ireo.
5Samy nanonofy izy roalahy indray alina, dia ilay mpandroso divay sy ilay mpitàntana mofon'ny mpanjakan'i Ejipta notanana tao an-tranomaizina; ka samy nanana ny nofiny, sy samihafa ny hevitry ny nofiny.
6Nony tonga teo amin'izy ireo Josefa ny maraina, dia nijery azy, ka indreo nalahelo tarehy izy.
7Dia nanontanian'i Josefa ireto mpanao raharahan'i Faraona niara-notanana an-tranomaizina taminy, tao an-tranon'ny tompony, nataony hoe: Nahoana izato hianareo no malahelo tarehy anio?
8Ka hoy ireo: Nanonofy izahay, ka tsy misy mahalaza ny heviny. Ary hoy Josefa taminy: Moa tsy an'Andriamanitra va ny fanambaran-javatra? Ka mba ambarao kely amiko izany.
9Dia notantarain'ny lehiben'ny mpandroso divay tamin'i Josefa ny nofiny, ka hoy izy: Nofiko fa indro nisy foto-boaloboka teo anatrehako;
10ary nisampana telo io foto-boaloboka io; dia nitsimoka izy, niposaka ny voniny, nanjary voaloboka masaka ny sampahony.
11Ary teny an-tànako ny kopin'i Faraona, ka nalaiko ny voaloboka, nofiazako ho ao anaty kopin'i Faraona ny ranony, dia natolotro teo an-tànan'i Faraona ny kopy.
12Dia hoy Josefa taminy: Izao no hevitr'izany: Ny sampany telo, dia hateloana.
13Ka hateloana sisa dia hasandratr'i Faraona ny lohanao, haveriny amin'ny raharahanao indray hianao, ka hametraka ny kopin'i Faraona ho eo an-tànany hianao, araka ny raharahanao teo aloha, fony hianao mpandroso divay azy.
14Koa raha avy izay hahatongavanao any amin'ny fahasambarana indray, ka mba mahatsiaro ahy hianao, sy mba te-hanisy soa amiko, dia lazao any amin'i Faraona any aho, asaovy hesorina amin'ity trano ity.
15Fa an-keriny no nangalana ahy tany amin'ny tanin'ny Hebrio; ary eto aho tsy nanao na inona na inona tokony handatsahana ahy amin'ity tranomaizina ity.
16Nony hitan'itsy lehiben'ny mpitàntana mofo fa tsara ny hevitry ny nofy nolazain'i Josefa, dia hoy izy taminy: Izao kosa no nofiko: niloloha karaba telo nisy mofo fotsy aho,
17ka tao anatin'ilay karaba ambony indrindra, nisy ny mofomamy isan-karazany rehetra ho an'i Faraona, ary nohanin'ny vorona tao anaty karaba nololohaviko ireny.
18Dia hoy ny navalin'i Josefa: Izao kosa no heviny: Ny karaba telo dia hateloana.
19Ka hateloana sisa dia hesorin'i Faraona ho afaka aminao ny lohanao, ary hahantony amin'ny hazo hianao, ka hohanin'ny vorona ny nofonao eo aminao.
20Nony tamin'ny andro fahatelo, izay fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i Faraona, dia nanao fanasana ho an'ny mpanompony rehetra Faraona, ka samy nasandrany tokoa ny lohan'ny lehiben'ny mpandroso divay sy ny lohan'ny lehiben'ny mpitàntana mofo;
21ny lehiben'ny mpandroso divay naveriny amin'ny raharahany indray, ka nametraka ny kopy teo an-tànan'i Faraona,
22fa ny lehiben'ny mpitàntana mofo kosa, nasainy nahantona; dia samy araka ny nivoasan'i Josefa ny nofiny taminy avy izany.
23Kanjo tsy mba nilaza ny amin'i Josefa ilay lehiben'ny mpandroso divay fa nanadino azy.
5Fa natory indray izy dia nanonofy fanindroany; ary indreo nisy salohim-bary fito sady vaventy no tsara tarehy, nisondrotra avy amin'ny tahony iray ihany.
Pejy: Voalohany < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.4440 seconds